Tag: Ukama | Martech Zone
Mabhizinesi mazhinji kune bhizinesi (B2B) yekutengesa macircuit akareba uye akaomarara. Chiyero chekuchengeta kumusoro kwepfungwa netarisiro kusvikira danho rekutenga raitwa uye kwete kuvabaya uye kuvadzinga. Ndakaona vamwe vanhu vachirera zvinotungamira mushe mushe, uye ndaisa "Usapindure" mubhuku rangu renhare kuti ndidzivise vanhu vanotengesa vasingadaro. Tsvagiridzo inoti kuzivisa tarisiro kunodhura $ 443 uku uchishanyira imwe inomhanya $ 596. Sei
Pakati pemwedzi waChikumi, shamwari dzangu nevatengi, Right On Interactive uye TinderBox, vakabatana kuti vagadzire inonakidza webinar nhevedzano nezvekuti hukama hunotenga sei mari. Right On Inopindirana, anotsigira iyo Martech Zone, inopa yekushambadzira otomatiki mhinduro ine tarisiro yekuhwina, kuchengeta, uye kukura hukama. TinderBox ndeye SaaS pamhepo yekutengesa chikumbiro software iyo inoita kuti zvive nyore kugadzira multimedia, yakabatana yekutengesa zvirevo zvezvaunotarisira. Ose ane kunzwisisa kunoshamisa mukati